Ihe omuma ihe na-ekpughere ihe omimi iji na-eme ka nnukwu ulo oru site na enyemaka nke SEO
Mgbe ị na-abịa njikwa okporo ígwè search engine ị ga-achọpụta googlena-akwado nnukwu ụdị. Ụdị ndị a na-eri ọtụtụ iri puku dollar n'emebughị anya. A pụghị ikwu otu ihe banyere obereụlọ ọrụ: ha na-agbasa ihe dị mkpa na mmefu ego na ndị ọrụ. Ka o sina dị, ha (obere ụlọ ọrụ) nwere ike inweta otu mpempe akwụkwọ achichana-eduga na Google kwa - set queue mikrotik wiki.
Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Nik Chaykovskiy na-eketa ihe nzuzo nke iru ọkwa dị elu na nyocha ọchụchọ, nke ga-enyere gị aka ịsọ mpinwere nnukwu ụlọ ọrụ.
# 1: Were Ndepụta nke gị SEO akụ
Ọ bụrụ na ị nọ na azụmahịa maka oge (ma nwee ngalaba na-agaazụ na mmalite 2000 ma ọ bụ ọbụna 90s) mgbe ị na-anọdụ ala na gold mine. Achọla ịhapụ ochie ngalaba na ihu ọma maka URLma ọ bụ SEO tactic. Ọ nwere ike backfire. Kwere ma ọ bụ na ọ bụghị, Google na-enye mmasị na ngalaba ochie dị ka ọ na-egosi na azụmahịa dị mma napụrụ ịdabere na ya. Jiri nchịkọta Google chọpụta peeji nke ịpụ apụ, ibe elere maka nkeji 3 ma ọ bụ ogologo, ibe na blọọgụ na ọtụtụokporo ụzọ. Dị ka nke ahụ, ndị a dị oké ọnụ ahịa maka ndị ọbịa weebụ gị ka ha wee mee ka ị nweta SEO mbụ.
# 2: Nweta ebe nrụọrụ weebụ gị na udi
Tupu ị malite itinye ego na mkpọsa SEO gị, meejide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ gị na Google jikọtara ya n'ụzọ ziri ezi. Ngwaọrụ Webmaster Google na-abanye ebe a. Ha ga-enyere gị aka ịmata ihega-edozi.
# 3: Kọwaa usoro ogologo-tail-keyword
Anwala ịlụ mpi na nnukwu ụdị na oke okwu.Ị ga-efu. Kama nke ahụ, gbalịa jiri okwu mkpịsị ogologo-okwu (okwu mkpirikpi ndị nwere nnukwu ihe ịga nke ọma). Echela na rawỌnụ ọgụgụ okporo ụzọ dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere ihe 'Keywords' na-enyefe, ị na-enwe ohere ka ukwuu nke ịgbanye okporo ụzọ gị gaa ahịa.Nọgide na-adị mkpa. Jiri njikọ inbound iji zụgharịa okporo ụzọ na webpages na nnukwu ntọghata. N'ebe a, nye onyinye ndị ọbịa gịenweghị ike iguzogide ma ọ bụ mejupụta ụdị ma tinye usoro. Ọ ga-arụ ọrụ anwansi.
# 4: Mee mkpọsa SEO banyere ahia ọdịnaya
E nwere otu ebe ebe obere egbe nwere ike ịkụ aka ndị dike - ọdịnayaahịa. Ịmepụta ihe dị elu site na saịtị bụ ọrụ nke nnukwu ụdị na-enyekarị aka. Mgbe ị na-ede banyere azụmahịa gị,ọdịnaya ga-abụ ihe ikikere na nke a bụ ihe blọọgụ na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ na ịhụnanya ịhụnanya gị. Ya ejula gị anyama ọ bụrụ na ha tinye njikọ nbanye (na ebe nrụọrụ weebụ gị) si otú ahụ mee ka okporo ụzọ gị dịkwuo mma.
Mee atụmatụ ma dezie oge maka ịmepụta ihe ndị ga - eme ka gị na gị gbanweeahịa ahịa. Mee ka echiche gị ma yie ka ị ga-eme ka mmasị gị dị. Jide n'aka na ị gụnyere njikọ ọrụ na redirectokporo ụzọ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ka oge na-aga, Google ga-amata mgbalị gị ma kwụọ gị ụgwọ dị ukwuu.
Ide ihe dị oke mma ma tinye ya na ọ na-ewe oge mana mgbalịbara uru oge eji. Ka ọ dịgodị, jide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ gị dị mma. Njikarịcha abughi nani maka SEO kamakwaenyere gị aka ime ka ndị ahịa ị na-ahụ anya ma ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, ngwa ngwa na-ebugharị ngwa ngwa na ibe weebụ nwere ike belata ọnụego ụba. Nọgide na-enwe ezi ihe ọrụ SEO kama ịmepụta weebụsaịtị ma debe ya.